Vedisma - Wikipedia
Ny vedisma na hindoisma tranainy na fivavahana vedika dia fivavahana nentin' ny vahoaka ariàna (Arya) avy teny amin' ireo lembalemban' i Iràna nankany India, taorian' ny fikorosy fahan' ireo tanànan' i Mohenjo-Daro sy i Harappa. Ity vahoaka ity dia voalamina araka ny sarangam-poko mifameno, izay nametraka ny herim-pahefany tamin' ny fanatanterahana fombam-pivavahana saro-drafitra ahitana teny sy fihetsika manan-kasina. Ianjadian' ny herin' ny teny izay miseho amin' ny endrika hiram-pivavahana ampitain' ny mpampianatra am-bava amin' ny mpianatra izany. Ny famoronana ny soratra dia nahafahana namorona amboaran-dahatsoratra ka ny lehibe amin' izany dia ny Rig-Veda.
Ny vedisma dia ny hevitra sy fanao ara-pivavahan' ny vahoaka indô-ariana sasany tao avaratra-atsinanan' i India (Punjab sy ny lemaka andrefan' i Ganges) tany India taloha teo anelanelan' ny taona 1500 sy 500 tal. J.K. (atao hoe Vanimpotoana Vedika) Ireo hevitra sy fanao ireo dia hita ao amin' ireo lahatsoratra vedika, ary misy fombafomba vedika izay mbola misy mpanao mandraka ankehitriny. Iray amin' ireo lova lehibe izay namolabola ny hindoisma izy; na dia mifanalavitra amin' ny vedisma tranainy ny hindoisma ankehitriny.
1 Fiaviany sy fandrosoany
2 Soratra masina
3 Fomba sy finoana
4 Fivoarany ho amin' ny brahmanisma
Fiaviany sy fandrosoany[hanova | hanova ny fango]
Ny fivavahana vedika dia nandroso nivoatra nandritra ny vanimpotoana eo anelanelan' ny taona 1500 sy 1100 tal. J.K., nefa ny fotony dia tany amin' ny kolontsaina sintasta any amin' ny tapany avaratry ny Fatrana Eoraziana (taona 2200 - 1800 tal J.K.) sy tao amin' ny kolontsain' i Andronovo any Azia Afovoany (taona 2000 - 900 tal. J.K.), ary angamba koa tao amin' ny sivililzasionan' ny Lohasahan' i Indo (taona 2600 - 1900 tal. J.K.). Fifangaroan' ny fivavahana tao amin' ireo vahoaka indô-ariana tao Azia Afovoany, izay fifangaroam-pivavahana ahitana singa tranainy avy amin' ny fivavahana tao Azia Afovoany sy singa vaovao avy amin' ny fivavahana indô-eorôpeana, ozay nindrana finoana sy fanao ara-pivavahana samihafa avy amin'ny kolontsaina tao Baktria sy Margiana; ary sisasisa tamin' ny kolontsain' ny vahoaka tao Harappa tao amin' ny Lohasahan' i Indo.
Ny lanjan' ny vedisma, izay notantanan' ireo brahmana dia niova tsikelikely avy amin' ny fanajana fombafomba mankany amin' ny tombantombana momba ny fiforonan' izao rehetra izao (kôsmôgônia).
Ny angon-dahatsoratra misy ny fampianarana momba ny fivavahana vedika dia atao hoe Veda. Ny teny hoe Veda (ara-bakiteny: "fahitana" na "fahalalana") dia sady midika fahalalana ireo hery miasa misy fazavana izay mifehy ny fisian' ny fiarahamonin' ny Ariàna, no midika fanatanterahana fomba fiasa izay afaka hianjady amin' ireo hery ireo. Manana anarana ahafahana manao fitokavana azy ireo hery ireo ka manjary deva manam-pahazavana (izay lasa andriamanitra ao amin' ny hindoisma). Ireto avy ireo lahatsoatra ireo: ny Rig-Veda, ny Sama-Veda, ny Yajur-Veda, ary ny Atharva-Veda.
Ny amboaran-dahatsoratra vedika dia mitoetra ho fototra, nefa niampy miandalana fivoasana atao hoe brahmana izay manorina ny firehan-kevitra vaovao tao India taloha, dia ny brahmanisma, izay nivoatra mankamin' ny endrika ara-tantara samihafan' ny hindoisma, ka nipaka hatramin' ny endriky ny hindoisma araka ny ahalalana azy ankehtriny. Ny Indiana ankehitriny dia mbola mampiasa ireo lahatsoratra vedika, nefa ampidiriny ao amin' ny kolontsaina mifanalavitra tanteraka amin' ny vedisman' ireo Ariàna taloha izany. Mba hahafahana mahalala ny endriky ny vedisma taloha dia tsy tokony hafangaro ny fivoasana hindoista ny Veda ankehitriny sy ny lahatsoratra vedika tranainy.
Fomba sy finoana[hanova | hanova ny fango]
Ny fombafomba (ritoaly) sy ny sorona ao amin' ny fivavahana vedika dia ahitana ny soma (zavapisotro avy amin' ny fajan-javamaniry manokana, inoana fa maha tsy mety maty ny taranaka), ny fivavahana amin' ny afo izay mandray anjara amin' ny fidiovana ara-pivavahana (havir), ny fanaovana sorona soavaly (ashvamedha). Ny fomba fanao amin' ny fandevenana sy amin' ny fandorana faty dia fahita nanomboka tamin' ny vanimpotoana rigvedika. Ny andriamanitra manan-danja indrindra ao amin' ny vedisma dia i Indra sy i Agni ary i Varuna. Ny fiheverana manan-danja indrindra dia ny satya sy ny ṛta.
Ny fanatanterahan' ireo mpiandraikitra ny raharaham-pivavahana brahmana ny fombafomba araka ny veda dia manatevina ny herin' ny mpanjaka (atao hoe raja), sady miantoka araka izany ny fandrosoan' ny vahoaka ariana.
Fivoarany ho amin' ny brahmanisma[hanova | hanova ny fango]
Nandritra ny tapany farany amin' ny vanimpotoana vedika (1100 - 500 tal. J.K.), ny brahmanisma dia nivoatra avy amin' ny fivavahana vedika, ka firehan-kevitra tao amin' ny fanjakan' i Kuru-Panchala (fanjakana taloha tao amin' ny tapany avaratr' i India) izay niely tamin' ny velaran-tany taorian' ny fionganan' ny fanjakan' i Kuru-Panchala. Ny brahmanisma dia iray amin' ny firehana nisy fiantraikany tamin' ny hindoisma ankehitriny, tamin' ny fotoana nikambanany tamin' ny lova ara-pivavahana tsy vedika avy amin' irero vahoaka indô-ariana tao amin' ny tany lemaka ao atsinanan' i Ganges (izay niteraka koa ny bodisma sy ny jainisma), ary nikambana koa tamin' ny lova ara-pivavahana teo an-toerana.
Fivavahana darmika: hindoisma - bodisma - jainisma - sikisma
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vedisma&oldid=1036981"
Voaova farany tamin'ny 1 Septambra 2021 amin'ny 14:38 ity pejy ity.